Joe Cole Oo Magacaabay LABADII Xiddig Ee La Degay Chelsea Kulankii Man City - GOOL24.NET
Joe Cole Oo Magacaabay LABADII Xiddig Ee La Degay Chelsea Kulankii Man City
Halyeyga Chelsea ee Joe Cole ayaa dhalleecayn u jeediyey laba ciyaartoy oo ka tirsan Blues oo uu tilmaamay inay sabab u ahaayeen guul-darradii soo gaadhay kooxdiisa hore kulankii Man City ee Etihad Stadium.
Chelsea ayaa guul-darro 1-0 ah kala soo kulantay Manchester City, waxaanay taasi sababtay inay 13 dhibcood ka dambeeyaan kooxda hoggaanka haysa.
Fursadihii koobnaa ee ay Chelsea heshay ayay iska khasaarisay, waxaana middii ugu wanaagsanayd lumiyey Romelu Lukaku oo qaybtii labaad kubadda dhaafin kari waayey Ederson oo ay isku kaliyeysteen.
Thomas Tuchel ayaa kulankan kaydka dhigay Mason Mount oo uu ka doorbiday Christian Pulisic iyo Hakim Ziyech oo weerarka kala shaqaynayay Romelu Lukaku.
Joe Cole oo falanqeeye ka ahaa ciyaartaas ayaa waxa uu magacaabay laba ciyaartoy oo la degay Chelsea kuwaas oo haddii aanay joogi lahayn ay natiijadu ka beddelnaan lahayd sida ay tahay ku dhamaatay ciyaaartu, isaga oo dhinaca kalena tusaale ugu soo qaatay sidii ay Arsenal ula ciyaartay Man City.
“Farqiga u dhexeeya bandhiggii Arsenal iyo Chelsea waxa uu ahaa sidii ay u ciyaareen Martinelli iyo Saka. Maanta, Pulisic iyo Ziyech may fiicnayn.” Ayuu yidhi Joe Cole.
Waxa uu intaa ku daray: “Chelsea maanta iyaga ayaa la degay.”
Thomas Tuchel oo ciyaarta kaddib warbaahinta la hadlay ayaa eedaymo u jeediyey Romelu Lukaku oo uu xusay in aanu u ciyaarin si fiican, iyadoo uu dhinaca kalena ku eedeeyey inuu ka khasaariyey fursaddii kali ahayd ee ay heleen.